1 Samueri 9:1-27
9 Zvino kwaiva nomumwe murume worudzi rwaBhenjamini, ainzi Kishi,+ mwanakomana waAbhieri, mwanakomana waZerori, mwanakomana waBhekorati, mwanakomana waAfiya, muBhenjamini,+ murume aiva nepfuma yakawanda.+
2 Aiva nomwanakomana ainzi Sauro,+ aiva muduku uye akanaka, pavanakomana vaIsraeri pakanga pasina murume aiva akanaka kumupfuura; kubva pamapfudzi ake zvichikwira akanga akareba kupfuura vanhu vose.+
3 Zvino mbongoro hadzi+ dzaKishi baba vaSauro dzakarasika. Naizvozvo Kishi akati kuna Sauro mwanakomana wake: “Ndapota, tora mumwe wevashandi musimuke, muende, munotsvaka mbongoro dzacho hadzi.”
4 Iye akapfuura nomunzvimbo yaiva nemakomo yaEfremu,+ akapfuura nomunyika yeSharisha,+ asi havana kudziwana. Vakapfuura nomunyika yeShaarimu, asi dzakanga dzisimo. Akapfuura nomunyika yevaBhenjamini, asi havana kudziwana.
5 Vakasvika munyika yeZufi; Sauro akati kumushandi wake waaiva naye: “Uya, ngatidzokere, kuitira kuti zvimwe baba vangu vangarega kunetseka pamusoro pembongoro hadzi, vakazvidya mwoyo pamusoro pedu.”+
6 Asi iye akati kwaari: “Ndapota, tarirai! Muguta rino mune munhu waMwari,+ uye murume wacho anokudzwa. Zvose zvaanotaura zvinotoitika chete.+ Handei ikoko iko zvino. Zvichida angatiudza nzira yatingaenda nayo.”
7 Sauro akati kumushandi wake: “Zvino kana tikaenda, murume wacho tichamuvigirei?+ nokuti chingwa chapera mumidziyo yedu, uye, hapana chinhu chokuunzira munhu waMwari wechokwadi sechipo.+ Chii chatiinacho?”
8 Naizvozvo mushandi wacho akapindurazve Sauro, akati: “Tarirai! Ndine chikamu chimwe chete pazvikamu zvina zveshekeri+ resirivha muruoko rwangu, ndichachipa munhu waMwari wechokwadi, uye iye achatiudza nzira yatingaenda nayo.”
9 (Munguva yekare pakati paIsraeri munhu paaienda kunobvunza Mwari aitaura sezvizvi: “Uyai, handei kumuoni.”+ Nokuti munguva yekare muprofita wanhasi ainzi muoni.)
10 Sauro akabva ati kumushandi wake: “Shoko rako rakanaka.+ Uya tiende.” Vakaenda kuguta kwakanga kuine munhu waMwari wechokwadi.
11 Pavakanga vachikwira mukwidza wokuguta, vakawana vasikana vachibuda kunochera mvura.+ Naizvozvo vakati kwavari: “Muoni+ ari munzvimbo ino here?”
12 Ivo vakabva vavapindura kuti: “Arimo. Tarirai! Ari mberi kwenyu. Kurumidzai zvino, nokuti nhasi auya kuguta, nokuti nhasi kune chibayiro+ chiri kupiwa nevanhu panzvimbo yakakwirira.+
13 Pamunongopinda muguta, muchabva mamuwana asati akwira kunzvimbo yakakwirira kunodya; nokuti vanhu havangadyi kusvikira auya, nokuti ndiye anokomborera chibayiro chacho.+ Kana izvi zvaitwa, vaya vakakokwa vangadya. Zvino kwirai, nokuti iye—muchamuwana iko zvino.”
14 Naizvozvo vakakwira kuguta. Zvavakanga vachisvika pakati peguta, vakaona Samueri achibuda kuzovachingura kuti vakwire kunzvimbo yakakwirira.
15 Zvino Jehovha akanga azivisa+ Samueri nezuro wacho Sauro asati auya, achiti:
16 “Mangwana panenge panguva ino ndichakutumira mumwe murume anobva kunyika yaBhenjamini,+ umuzodze+ kuti ave mutungamiriri wevanhu vangu vaIsraeri; iye achaponesa vanhu vangu paruoko rwevaFiristiya,+ nokuti ndaona kutambudzika kwevanhu vangu, nokuti kuchema kwavo kwasvika kwandiri.”+
17 Samueri akaona Sauro, Jehovha akati kwaari: “Hoyu murume wandakati nezvake, ‘Uyu ndiye achadzora vanhu vangu.’”+
18 Sauro akabva aswedera pedyo naSamueri pakati pegedhi akati: “Ndapota, ndiudzeiwo, Imba yomuoni iri kupi?”
19 Samueri akapindura Sauro akati: “Ndini muoni wacho. Kwirai muri mberi kwangu muende kunzvimbo yakakwirira, muchadya neni nhasi,+ ndichakurega kuti uende mangwanani, uye ndichakuudza zvose zviri mumwoyo mako.+
20 Kana dziri mbongoro hadzi dzawakarasa mazuva matatu apfuura,+ usaisa mwoyo wako+ padziri, nokuti dzawanikwa. Zvinhu zvose zvinodiwa zviri pakati paIsraeri ndezvaani?+ Hazvisi zvako nezveimba yose yababa vako here?”
21 Sauro akapindura, akati: “Handisi muBhenjamini wedzinza duku+ pamadzinza aIsraeri+ here, uye mhuri yangu haisi iyo isingakoshi kwazvo pamhuri dzose dzedzinza raBhenjamini here?+ Saka nei mataura neni chinhu chakadai?”+
22 Samueri akabva atora Sauro nomushandi wake, akaenda navo kuimba yokudyira, akavapa nzvimbo pamberi pavose+ vakakokwa; uye ivo vakanga vari varume vanenge makumi matatu.
23 Gare gare Samueri akati kumubiki: “Unza mugove wandakupa, wandati kwauri nezvawo, ‘Uchengete.’”
24 Mubiki akabva atora gumbo nezvaiva pariri, akazviisa pamberi paSauro. Akati: “Hezvi zvanga zvakachengetwa. Zviise pamberi pako. Idya, nokuti vazvichengetera iwe kusvikira panguva yakatarwa kuti udye nevaya vakakokwa.” Sauro akadya naSamueri zuva iroro.
25 Vakazoburuka munzvimbo yakakwirira,+ vakaenda kuguta, akaramba achitaura naSauro vari pamusoro pemba.+
26 Vakafumomuka, utonga huchangotsvuka Samueri akashevedza Sauro pamusoro pemba, achiti: “Chimuka, kuti ndikurege uende.” Naizvozvo Sauro akamuka uye vari vaviri, iye naSamueri, vakabuda panze.
27 Pavakanga vachiburuka nepamucheto peguta, Samueri akati kuna Sauro: “Udza mushandi+ kuti atipfuure”—naizvozvo akapfuura—“asi iwe, mira zvino kuti ndiite kuti unzwe shoko raMwari.”